Amp Citrate Raw (71776-70-0) ndị na-eweta ọrụ HPLC≥98% | AASraw
/ ngwaahịa / Ihe nkuzi / Amp Akwụkwọ (71776-70-0)
Rating: SKU: 71776-70-0. Category: Ihe nkuzi
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Amp Citrate (71776-70-0), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkọta mma.
Dị ka e kwuru n'elu AMP citrate bụ ezigbo onye ikwu DMAA ma ọ bụ 1,3-dimethylamylamine. Enwere ike igosipụta mmekọrịta chiri anya n'etiti ogige abụọ a site n'eziokwu bụ na AMP citrate (methylpetanamine) na DMAA (AKA methylhexanamine) nwere otu ihe owuwu ahụ, mana DMAA nwere carbon ọzọ na ọkpọ ya…
Amp Citrate isi Characters
aha: Amp Citrate
Usoro Molecular: C6H15N • HCl
Molekụla arọ: 137.7
Igwe okirikiri Citrate
Aha Igwe: Amp Citrate
Epepụpụ ihe na-emepụta ihe
Igwe Eji Njikere
Kemgbe afọ ole na ole gara aga, AMP Citrate aghọwo ihe na-ewu ewu na ihe mgbakwunye na mgbatị na mmemme ndị dị egwu. Site na echiche nke sayensị, a maara ya dị ka methylpentanamine, 4-amino-2-methylpentane citrate ma ọ bụ 1,3-dimethylbutylamine (DMBA), ma a na-akpọkarị ya "DMAA" ọhụrụ. Nke a pụtara site n'ihe ndị dị ịrịba ama - machibido ma na-akpali akpali, ma n'ihe gbasara usoro ihe ọkụkụ na mmetụta.
AMP Citrate bụ ihe na-akpali akpali maka usoro ụjọ. Naghị emekarị na nnukwu doses, mana enwere ike ịchọta ya na Pouchong Tea, ma a kwenyere na ọtụtụ n'ime AMP Citrate na-eji na mgbakwunye bụ artificially synthesized.
N'ihi ọdịdị ya na DMAA, ojiji ya na uru ya na mgbakwunye na-adị nnọọ ka nke a. Onye isi ochichi AMP na-emetụta usoro nchebe nke etiti dị ka caffeine mana ọ bụ n'ezie n'ụzọ siri ike karị. Mgbe ị na-eji ya tupu ọzụzụ, ị ga-achọpụta:
-Anwewanye ike (karịsịa mgbe ejikọtara ya na caffeine)
-Ichebara anya nke uche
-Ndị na-edozi metabolism
-Anwetakwu aka n'oru egwuregwu
N'adịghị ka caffeine dị elu, AMP Citrate na-ejikọta ya na nnyefe nke ume na-adịgide adịgide na-enweghị ihe mberede.
AMP Ihe ntinye aka nke ọma enweela ezigbo ọsọ dị ka ụfọdụ n'ime ihe ntanye kachasị ere ahịa na ahịa.
Ihe mgbakwunye nke mgbakwunye nwere AMP Citrate:
-BPM Labs Onye 2.0
-Dapụtara na-enweghị ike ịgbanwe
Kedu ihe bụ usoro Amp Amp
N'ihi enweghi ule na-adigide na AMP, o siri ike iji chọpụta ihe a tụrụ aro. Otú ọ dị, a na-atụ anya na ọgwụ ga-adị elu karịa DMAA na-akọwa ya site na 100 ka 350 mg. Oge arụ ọrụ dị irè banyere 4-6 awa.
Ọ dị irè karị iji nwekwuo ike n'oge a na-emega ahụ. Ọ kachasị mma iwepụta ihe gbasara 30 nkeji tupu ọzụzụ. Iji mee ka mmelite gị na abụba na abụba, ị ga-ewere ya n'ụtụtụ maọbụ tupu ị rie nri.
AMP na-arụ ọrụ synergistically na caffeine, na n'ihi nke ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta mgbe nile ma ihe abụọ na mgbakwunye ihe omume. N'ihe banyere iji ya "na-emegharị", a ghaghị itinye 200-300 mg nke caffeine iji mee ka uru karịa.
Malite na obere onunu iji chọpụta nkwụsị gị, ma mee ka dosing si n'ebe ahụ pụta.
Kedu ike Amp Citrate na-arụ
Ọrụ AMP citrate, na tiori, site n'otu mpaghara dịka DMAA, ma ọ bụghị dị ka ọ dị. Nke a na - eme ka ọ bụrụ ihe na - akpali akpali, dịka ọ na - arụ ọrụ site n'ịhapụ onye nuropineranster dị ike, na - agbakwunye dopamine. Ọnụ ọgụgụ dị elu nke hormoni abụọ a nwere ike ime ka anyị nwekwuo anya, ilekwasị anya, ike, mkpali, na nchepụta uche.
Ndi AMP kwadoro iwu?
Dịka taa, ee. AMP Onye omekorita abụghị ihe na-akwadoghị iwu. Otú ọ dị, ọ bụ FDA na-enyocha ya mgbe nzachara mkpesa gbasara mmetụta ya dị iche iche ka e nyefere. Ya mere, ọ bụ ezie na AMP Citrate bụ iwu maka oriri ụmụ mmadụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ ewepụtawo ya iji hụ na ha agaghị aghọ ihe FDA n'ọdịnihu.
AMP Citrate ka dị, mana FDA na - egosi na ọ ga - emechi ngwa ngwa. Enwere ya n'okpuru aha niile edere n'elu, ma eleghị anya ọzọ, n'ihi ya, ọ ga-abụ oge tupu oge nhọrọ gị niile apụla. Mana mara na ụlọ ọrụ ndị na-eji aha agbanwe agbanwe iji nweta iwu FDA abụghị ụlọ ọrụ kachasị ịtụkwasị obi iji rụọ ọrụ.
Ndi Nwepu okpu okpu nwere ihe ozo
N'ihi mmekorita ya na DMAA, mmetụta ndị dị na AMP citrate dịkwa nnọọ yiri. Nnukwu doses nwere ike ime ka obi jọọ njọ, obi mgbawa ngwa ngwa, na mgbaàmà ndị metụtara ya. Ndị ọrụ nke obodo AMP kwukwara na ọ nwere ike ime ka ụgbọ elu DMAA dịka ụda mgbe mmetụta ahụ na-apụ.
N'ihi na AMP citrate bụ ihe ọhụrụ mgwa ihe, enwere ọmụmụ ihe ole na ole na ụlọ ahụ na-arụ ọrụ na nchebe. Dị ka ndị dị otú ahụ, ọ na-akwado ndị ọrụ nile nke AMP citrate iji ịkpachara anya, ghara iri ihe karịrị ọgwụ ndị a tụrụ aro, na iji ya na mmanya na-aba n'anya, ma ọ bụ ngwaahịa dị iche iche ma ọ bụ nri nwere mkpali. Ọ bụrụ na ị nọ na ọgwụ ma ọ bụ na-arịa ọrịa, ọ gwara gị ka ị ghara iji ngwaahịa ndị nwere ihe a.
Otu esi zụta Amp Citrate si AASraw
Fluticasone ntụ ntụ (90566-53-3)
Boldenone cypionate ntụ ntụ